27 HTML iyo kaararka CSS dhammaan noocyada eCommerces, blogs iyo in ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Kheyraadka internetka waa ku dhowaad aan la koobi karayn, laakiin helitaanka iyaga tayada waa wax adagIn kasta oo xoogaa la baadhayo oo la haysto liis wanaagsan oo bogag internet ah oo loogu talo galay naqshadeynta, haddana arrimaha way fududaan doonaan. Waqtiga ay luqadaha sida HTML iyo CSS ku jiraan qaab aad u wanaagsan, ku dhowaanshaha ilaha lacag la'aanta ah ee tayada sare leh waxay u dhowdahay dhowr qasabno.
Waxaan qori doonnaa taxane ah kaararka bilaashka ah ee HTML iyo CSS kuwaas oo si fiican ugu habboon dhammaan noocyada baloogyada, ganacsiga, ganacsiga elektiroonigga ah iyo waxyaabo kaloo badan. Aruurinta masaafada dheer si loogu daro qaar ka mid ah shaqada aad u qabanayso dhammaan noocyada macaamiisha. Aynu ku sameyno liiskan isticmaala codepen.io si aad uga heli karto lambarka labadaba HTML iyo CSS.
1 Blog Card madadaalo # 1
2 Kaararka News CSS kaliya CSS
3 Sheyga Boostada Blog
4 Kaararka Blog
5 Kaararka ganacsiga ee jawaabta leh
6 Kaar kale oo baloog ah
7 Kaararka ganacsiga
8 Kaarka ganacsiga 3D
9 Kaarka ganacsiga CSS
10 Xargaha kaararka
11 Kaararka 3D ayaa shaaca laga qaaday
12 Kaarka Naqshadeynta Waxyaabaha jawaabta leh
13 Shabakadda kaararka Flexbox
14 Isku dhaca Kaararka Qabiilooyinka
15 Kaararka isbarbar dhigga eCommerce
16 Naqshadeynta Wajahadda - Kaarka Alaabta
17 Kaarka alaabta
18 Kaararka wax soo saarka ee Flexy
19 Kaararka rog
20 Kaararka sida Kaararka Wax soo saarka ee 3D
21 Kaarka Parallax
22 Hover saamaynta kaararka
23 Saameyn fudud
24 Kaararka Qoto dheer ee Parallax
25 Kaarka UI ee filimada
26 Kaarka astaanta
27 Kaararka la isku duubay ee Polaroid
Blog Card madadaalo # 1
Una kaarka naqshadeynta weyn taasi waxay dhahdaa ku dhowaad wax kasta sawirka u taagan, waxaad aadi kartaa codepen.io si aad u hesho lambarka u dhigma oo aad ugu rakibto websaydhkaaga.
Kaararka News CSS kaliya CSS
Kaadhkan, oo leh Waxyaabaha Shisheeye asal ahaan, waxay u taagan tahay animation-keeda siman ee muujinaya waxa ku jira. Waa nadiif CSS.
Sheyga Boostada Blog
Horudhac shabakadda adoo keenaya tilmaamaha jiirka dushiisa. Waxay leedahay CSS iyo HTML si loogu daro wax fudud.
Naqshadeynta naqshadeynta kaarka blog-ka ee yar. Animations dhakhso ah oo siman tayo sare leh oo aan cidna uga tagaynin danayn.
Kaararka ganacsiga ee jawaabta leh
U taagan yahay animation-ka yar adoo dul wareegaya tilmaamaha jiirka sawirka kaarka.
Kaar kale oo baloog ah
Ayaa ka muuqda qoraalka kaarka marka la wareejinayo isku mid ah
Una kaar fudud laakiin hadda ah ku soo booqo demo iyo koodh HTML iyo CSS.
Kaarka ganacsiga 3D
Kaarkaani waa u qalmaa animation 3D ah oo leh HTML iyo CSS. Waxaa sameeyay Elena Nazarova, waxay kufiican tahay kaarka ganacsiga ee midabbada leh.
Kaarka ganacsiga CSS
Kaar ganacsi oo aad u layaab leh CSS taas wareega 3D si loogu banneeyo cinwaanno taxane ah oo cinwaanno URL ah oo ka jawaaba tilmaamaha jiirka xilligan aan hoos u dhigno.
Kaadhadh taxane ah oo si fiican loo dhigay oo leh naqshad indho qabad leh. Waa wax lala yaabo bilicdeeda fudud, laakiin ku garaacid wanaagsan HTML, CSS iyo lambarka SCSS.
Kaararka 3D ayaa shaaca laga qaaday
Taxanaha shabakadaha kaararka shaaca ka qaad macluumaad dheeri ah waqtigaan jiirkii ayaan uga tagnay astaanta cagaaran. Isla mar ahaantaana aan ka tagno tilmaamaha, inta kale ee shabakadda ayaa u socota si habboon.
Kaarka Naqshadeynta Waxyaabaha jawaabta leh
Iyada oo la luqadda naqshadeynta google, Kaararkaani taxanaha ahi waxay u muuqdaan kuwo u taagan astaanta menu-ka oo furaya dhammaan macluumaadka jilayaasha sida kiiska tusaalaha ah. Animations qurux badan oo dareen leh muuqaal muuqaal weyn.
Shabakadda kaararka Flexbox
Nooca Kaarka dherer isku mid ah oo ay ugu istaagaan adeegsiga qaabka xargaha xargaha. Qiyam kale oo ka mid ah qiimaheeda ayaa ah isticmaalka saamiyada CSS iyo shaandheeyaasha CSS.
Isku dhaca Kaararka Qabiilooyinka
El ciyaarta mobilada caanka ah wuxuu kaararka ku leeyahay HTML iyo CSS oo uu abuuray Andre Madarang. Waan dhex mari karnaa iyaga oo wata animation sax ah oo heer sare ah.
Kaararka isbarbar dhigga eCommerce
Iyadoo a animation agile, Kaararkaani waxay kugu dhiirigelinayaan inaad raadiso cunsurradooda si aad u ogaato waxa ay ku saabsan yihiin. Iyadoo naqshad wanaagsan laga helay Cumar Dsoky.
Naqshadeynta Wajahadda - Kaarka Alaabta
Kaar kaamil ah oo loo qaabeeyo kuwa ka mid ah wax soosaarka e-commerce. Lagu sameeyay HTML iyo CSS.
Kaararka wax soo saarka ee Flexy
Sida magaceeda ka muuqata, wuxuu adeegsadaa lanbar si loo abuuro animation xiiso leh marka aan gujino badhanka ku dar gaadhiga.
Koodh yar oo loogu talagalay kaararka qaarkood oo leh jilicsan iyo animation kaamil ah. Daqiiqado gudahood waad ku dari kartaa. Dhawaan ayaa lagu daray codepen.
Kaararka sida Kaararka Wax soo saarka ee 3D
Waa in la ogaadaa in kaararkaasi yihiin sidii oo aan kaararka taxanaha ah miiska saarnaa. Tilmaameha ayaa loo daayay isaga oo nasanaaya oo wey soo dhaweynayaan, mid walbana guji, oo tusaya dhabarka kaarka si uu u muujiyo macluumaadka sheyga. Mar labaad ayaan gujinaynaa oo uga tagnay sidii ay u ahayd xagga hore. Kufiican barashada guryaha 3D CSS.
Tijaabo aad u muuqata oo leh a saamaynta flip indhaha-qabashada. Way fiicantahay inaad aragto si aad u ogaato waxa ay ka hadlayso.
Hover saamaynta kaararka
Saamayn fudud laakiin gimmicky hoos ku saabsan kaararka.
Isagoo garaacaya saameyn fudud, laakiin taasi saameyn weyn ayey leedahay xilligan aan aragno.
Kaararka Qoto dheer ee Parallax
Kaararkaasi waxay xambaarsan yihiin fikradda parallax ilaa sare si loo sameeyo qaar ka mid ah kaararka aadka u xiisaha badan ee naqshadeynta. Kaliya waa inaad aragtaa si aad sifiican ufahamto saameynta ay kuleedahay adeegsadaha markaad dooratid qaar kamid ah qaybaha kujira balooggeena.
Kaarka UI ee filimada
Kaarka ah Qaab-dhismeed weyn oo lagu sameeyay HTML iyo CSS.
Muy animations wanaagsan kaarka xiriirka oo aan ku hirgelin karno helitaanka astaamaha warbaahinta bulshada. HTML iyo CSS.
Kaararka la isku duubay ee Polaroid
Iyada oo leh guryaha, miirayaasha iyo Gudbinta caadooyinka CSS Taxanahan kaararka kooxaysan ee Polaroid ayaa la abuuray; ha seegin sawiradan SVG webka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 27 kaararka HTML iyo CSS oo bilaash ah oo loogu talagalay blogyada, e-commerce iyo waxyaabo kale oo badan
Waxa suurtagal noqon doonta in la galiyo mid ka mid ah kaararkaas bogga leh wordpress
Cajalad 77-mitir ah oo laga sameeyay Ireland waxay muujineysaa sheekooyinka halista ah ee Game of Thrones